Ngosipụta Visual | Prodị Prototype - Mepụta - --mepụta Proto Tech Co., Ltd.
Ngwa / Ngosipụta Anya
A na-eme ụdị ngosi iji mee ka ọ dị ka ọ bụ ezigbo ngwaahịa. Na ngwangwa prototyping teknụzụ nke 3D ebi akwụkwọ, CNC machining, na post-gụchara, CreateProto emepụta elu-edu visual ngosi ụdị fọrọ nke nta ka ezigbo ngwaahịa. Modelsdị ndị a dị mma maka iji na-elekwasị anya, otu azụmahịa na ahịa na ahịa ndị ọzọ.
Commerializing gị mepụtara, Echiche ma ọ bụ Product
Gịnị Bụ Ngosipụta Ngosipụta?
Ihe ngosi ngosi bu ihe ngosi nke uzo esi meputa ihe ngosiputa. Ebumnuche ya bụ igosipụta ụdị ihe ngosi 3D gị ma mee ka ndị na-ege gị ntị nwee mmasị. Ha ekwesighi ịrụ ọrụ dị ka ihe eji arụ ọrụ, mana ị chọghị ka ha yie ihe siri ike na enweghị ntụpọ dị ka ụdị echiche gị. Ọ bụ ezie na ụdị echiche dị ka eserese 3D, usoro ngosi dị ka nsụgharị 3D a na-ahụ anya.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ngosipụta ngosipụta dịkwa mkpa iji gosipụta ngosipụta ọrụ nke ngwaahịa a. Typedị prototype a na-agwakọta arụmọrụ nke ngwaahịa na ọdịdị ya niile. O yikarịrị ka a ga-eji ihe eji emepụta ọkwa iji mepụta arụmọrụ na arụmọrụ. Ihe ngosi a bu ihe di nma iji gosiputa oru oma nke oma tupu imeputa igwe.
Uru Azụmaahịa nke Ngosipụta Ngosipụta Anya
Enwere ike iji ụdị ngosi maka ngosi nye ndị okenye metụtara oke dị ka ndị isi, ndị ahịa na ndị itinye ego, ma ọ bụ ịzụ ahịa ahịa ma ọ bụ foto ịre ahịa iji nyere gị aka nye ikike ngwaahịa gị, ma ọ bụ nkwalite ahịa na nyocha ahịa na ndị ahịa
Ma ụdị ngosi dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị, ha dabere na usoro azụmaahịa gị, atụmatụ ngwaahịa na mmefu ego gị. Ọ bụghị oru ngo ọ bụla nwere ihe a chọrọ. Agbanyeghị, ha nwere ike ịba uru maka iji ya rụọ ọrụ. N'ihi na ngosi ụdị nwere ike ọ bụghị naanị na-emekọ ihe na-eji ọkụ na-elekwasị anya ule, na ike ga-eji na-atụle na nwere ahịa banyere ha ngwaahịa na-atụ anya, na-enye gị a ohere ka mma na-amata àgwà ha kwupụta ngwaahịa na mmalite nkebi nke imewe.
Ọnọdụ Iji Ngosi Ihe Nlereanya a Lot
Nyocha dị n'ime
Na-akpali mmasị ahịa
Chọpụta na ịghọta ohere
Enwere ike ịzụta na-
Hankwalite ohere iji nweta ego
Ahịa na ahịa ahịa
Agụmakwụkwọ na ọzụzụ ọzụzụ
Ngwọta Kacha Mma maka Ngosipụta Ngosipụta Anya Gị
Dị ka ngwaahịa mmepe gị usoro, ngosi prototypes nwere ike tupu ma ọ bụ mgbe i dozie imewe nkọwa na a ọtọ prototype. Ọ bụrụ na ị ga-eme njikarịcha njikarịcha, ịnwere ike iji ụdị ngosipụta anya gị na ndị otu imewe gị n'oge gara aga, ka ị nwee ike itinye nyocha dị n'ime imewe nke ụdị ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ga - eme nyocha ahịa ozugbo enwere ike, ị nwekwara ike igosi ndị na - etinye ego ma ọ bụ ndị nwere ikike ịnwe ikikere iji gosipụta usoro yana ijikọ ọrụ ngwaahịa yana ọdịdị ya niile.
Ihe ọ bụla ị chọrọ, CreateProto nwere ike ịnye teknụzụ prototype kachasị mma iji kwado azụmahịa gị.
Họrọ 3D Printing?
3D obibi na mmako n'ichepụta na-enye gị a nso nke na-eri-irè na ngwangwa prototyping nhọrọ nke nwere ike ukwuu belata ụzọ-isi na-efu nke na-amị kasị mma ngosi ụdị.
Ma ọ bụ CNC Prototyping?
Post Emecha Nkwado
Want chọrọ inweta ihe ịchọ mma ịchọ mma ma ọ bụ ihe osise a tụrụ atụ? Anyị nwere nnọọ zụrụ azụ prototype gụchara otu ndị dị njikere ime ka gị aghụghọ ghọọ eziokwu. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ikike ijikwa nke ọma na imepụta ihe ngosipụta dị elu. Ha na-a attentiona ntị na nkọwa niile, ka mmadụ niile nwee ike ịdị na-ekwekọ na atụmanya ndị ahịa.
Post gwụ ga-enye ihe oyiyi ọhụrụ iji rụọ ọrụ ngosi ngwa ngwa. Ngalaba anyị nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ na-eji aka aka emecha, primer, agba-egwuregwu agba, udidi na nro-aka imecha na ọtụtụ ikike ịkpụzi maka mgbakọ ziri ezi na ọdịdị dị mma.
Iji nye a ngwa ngwa emulated prototype otu dị ka nke ikpeazụ ngwaahịa ka ahịa, anyị na-akwado onye-nkwụsị elu finishing arụmọrụ maka ahịa mma, na-enye uru-kwukwara support na ngwaahịa na-emepụta, na-enyere ha na-ebuli ha aghụghọ n'ihi na ụfọdụ ngwaahịa mmepe Filiks.
CNC Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing,